शब्दकोश: पत्रमित्रको नाममा
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, May 30, 2010
खुरुखुरु पढें । कुनै मिठो संगीत सुनिरहेजस्तै लाग्दै गयो पुछारसम्म । तर प्रतिक्रियामा लेख्ने कुरा भने केहि निस्केन । त्यसैले यत्ति लेखें ।
आकार May 30, 2010
एउटा सान्दर्भिक पोष्ट !
"अनि मान्छेले कसैलाई चिज गर्छ नि, त्यो पनि साटोमा आफूलाई उस्तै व्यवहार होस् भन्ने आग्रहभाव त हो "
सबै भन्दा सान्दर्भिक र वास्तविक वाक्य यही नै हो !!! यो सबै मा लागु हुन्छ कारण एक हात ले ताली बज्दैन । यदि एउटा ले, आफ्नो लक्ष्य ठान्छ तर अर्को ले त्यही कुरा विकल्प झैँ रोज्छ भने, आपस को जिवन को रेल सँधै को लागि छुट्नेछ । अनि यो, देख्दै र भोग्दैआएको तितो यथार्थ हो ।
"आफ्नोबारे सानो-सानो कुरा सुनाउने तिम्रो बानी मलाई आत्मबखान कत्ति पनि लाग्दैन, बरू त्यसले मलाई तिमीसँग एउटै सिरानीमा शिर पारिदिएको आभास हुन्छ" - अनि यो कुरा चाँहि राम्रो लागुन्जेल मात्र हो, अन्यथा यी सबै कुराहरु बच्चा र केटाकेटी कुरा लाग्छन् कुनै तुक नभएको !
आजलाई यत्ति नै !
Basanta May 31, 2010
गज्जब! बेजोड!! नि:शब्द बनायो यो मनमोहक लेखाई, निर्बिघ्न पोखिएको भाव‍प्रवाह र ईमान्दार अभिब्यक्तिले! सलाम तपाईँलाई! तपाईँको लेखाई सधैं मन पर्छ मलाई तर यो विशेष लाग्यो।
र म ठोकेर भन्दिन्छु यो निबन्ध नेपाली साहित्यको कालजयी कृति बन्ने पात्रता राख्दछ। मेरो अनूरोध तपाईँसंग, यसले प्रकाशनमा पनि आउन पाओस्।
Dilip Acharya June 01, 2010
पढ्दै जाँदा...एकदमै रोमाञ्चक र लयबद्ध संगीतको झैं मिठास भेट्दै थिएँ..."आजलाई यत्ति नै !" मा पुगे पछि मनमा 'किन यत्ति मात्रै' जस्तो लाग्यो । साँच्चै भनेको अझै 'पढुँ-पढुँ' लाग्दै थियो :)
पढ्ने रहर नमेटिदै बीट मारिएका तपाईका शब्दहरुले पछ्याइरहे,कसिलो सम्बन्धको key कहाँ खोज्ने होला ???
भुवन राउत June 13, 2010
३ पटक पढे तेही पनि फेरी पढन मन लागि रहेको छ ।
( मैले मस्का मार्न थालेपछि तिमीले सातो खान्छौ – “हामी साथी मात्र हौँ के गधे !!” मानौँ म ट्राफिक नियम मिच्दै बीच सडकमा ढसमस्स उभिएको छु र तिमीले सिटी फुकेकी हौ )
यो वाक्यले साह्रै मन छोयो
पढ्न थालेपछि छाड्नै सकिन, र एकै सासमा सिद्ध्याएरै छाडें । एउटा मिठो र मार्मिक आत्मियता-हार्दिकताको रुपमा यो चिठी जीन्दगीको बाटोखर्च पाएझैं मान्यो मनले । सुन्दर वाक्य विन्यासका शील्पका कारण पढीरहँदा आँखाका कोसकोस रसाए, मन कस्तो कस्तो भारी जस्तो भो । तर धीत मरेन, अझै पढीरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने लोभले ह्रदयमा कब्जा गरीरह्यो । समग्र लेखाईले आफूतिर तानिरहे, तर तलका यी हरफले हुरुक्क पारे मलाई .... प्रिय मित्र ! बधाई है!!!
"तिम्रो एक वर्षे जेठो अवतारले मलाई कान निमोठ्ने इजाजत पनि सुरक्षित राखेको छ । म पनि लिकमा हिँड्ने दबाबमा रहन पाउनेछु । तिम्रो जीवनमा पनि मैले हाँसो छर्ने बाटो देखेको छु ।"
Anuj Shrestha June 19, 2011
'तिमीले छोडेको काठमाडौँ त्यस्तै नै छ । सडकहरू उस्तै रापिला, तिनमा चलमलाइरहेका अटेसमटेस गोडाहरू उस्तै भोका । मानौँ सबका सब हिंस्रक सिकारका लागि सुर कसेर खनिएका हुन् । बरू अझ यो सहरको तनाव भयङ्कर बढेको छ, घट्ने नाम छैन । कामको लिकबाट फुत्किएर हत्तपत्त साथीहरूसँग कफीको एक सुरुप लिन नपाउनु नै यो सहरको विशेषता हो जस्तो लाग्न थालेको छ अचेल । घडीको सुइसँगै एकाकार भएर दौड वत्स भनेर समय बूढाले कता-कता आदेश दिइरहे झैँ सबैमा एकोहोरोपनको भूत सवार छ । यस्तोमा म पनि घानमा परेको मकै हुनबाट कसरी पो छुट्थेँ र ?'
- तपाईंका निबन्ध हुन् या कविता - गजल सबैंलाई म उसरी नै रुचाउँछु ।जुन भावप्रवाह र कलात्मक चित्रण हुन्छन् नि ती मन,मस्तिष्क छुँदै बग्छन् सङ्लो नदी बनेर पाठकका स्वप्न फाँट हुँदै.....।
Chandra Gurung June 19, 2011
मनै छुने प्रेमपत्र भन्न रुचाएँ । यस प्रेमी पात्रले प्रेम गर्न मात्र जानेको होइन । ऊ आफू वरपरको सामाजिक, राजनैतिक,अन्य थुप्रै परिवर्तन र स्थितिदेखि परिचित छ र आफ्नो प्रेमिकाको साथै देश, गाउँ समाज र वरिपरिका वस्तुस्थितिबारे राम्रो जानकारी राख्दा छ । राम्रो लाग्यो लेखन । चाँडै मिलनको शुभकामना!
Ashesh November 12, 2011
आजलाई किन यत्तिनै ?? अन्याय भयो पाठकलाई दाजु । कुन वेला पढि सकियो थाहा भएन । म निथ्रुक्क भिजिसकेँ यि भावनाका सितहरूले । धेरै वोल्दिन ।
~ bhoowan ~ November 13, 2011
यी शब्दका खेलाडी हुन् , कुन बेला थाहै नदिई 'गोल' गर्छन ... कति रमाईलो लाग्छ !